Home Wararka Eedayn loo jeediyay Yamamoto, iyo isagoo la amray in uu degdeg u...
Eedayn loo jeediyay Yamamoto, iyo isagoo la amray in uu degdeg u tago Washington
Waxaa soo kordhaya eedaynta loo jeedinayo Safiirka dalka Maraykanka u fadhiya Soomaaliya mudane Donald Yamamoto. Safiirka ayaa waxa uu qayb ka noqday siyaasada isqab-qabsiga ku dhisan ee ka jirta Soomaaliya.
Safiirka ayaa si indho la’aan ah u taageeray siyaasada Farmaajo, taas oo keentay in Farmaajo iyo kooxaha la shaqeysta ay ku dhiiradaan burburinta hay’adihii dowliga ahaa ee dhibka badan laga soo maray in la dhiso.
Ka dib markii uu ku fashilmay siyaasada Soomaaliya, isla markaana ay muuqato in Soomaaliya ay gali doonto waji cusub oo keeni doono dagaal sokeeyo, ayaa dublamaasiyiin iyo aqoonyano Maraykan ah ay ku eedeeyeen Yamamato in uu lumiyay kalsoonida umadda Soomaaliyeed isla markaana uu khatar galiyay danaha Maraykanka ka leeyahay Soomaaliya.
Siyaasiga caanka ah Michael Rubin ayaa sheegay in Yamamoto uu ku fashilmay Soomaaliya sidaas darteedna si deg deg ah looga wareejiyo xilkaas. Rubin ayaa sheegay in uu Yamamayo yahay qof waayeel ah xiligii howl gabka ahna uu ku jiro. Si Soomaliya looga badbaadiyo dhibaatada ku soo socto waxa uu ku baaqay in Yamamoto laga badbaadiyo Soomaaliya.
Dhanka kale, sida ay sheegayaan warar lagu kalsoon yahay Amb Yamamato ayaa looga yeeray in uu si deg deg ah uu asbuuca danbe ku tago magalaada Washington. Lama oga sababta rasmiga ah ee Yamamoto loogu yeeray in uu deg deg ku soo galo Washington, laakiin ilo wareedyo ay la hadashay MOL ayaa sheegaya in lagala hadli doono khatarta ay keentay qaabka uu ugu dhex jiro siyaasada Soomaaliya. Yamamato ayaa lagu eedaynayaa in uu isaga qayb ka yahay qalalaasaha siyaasadeed ee ka jira degaanka Galmudug.